Chii chakafanana, wachi, skateboards nemuchina wemaindasitiri zvakafanana? Ivo vese vanovimba nemabhegi kuchengetedza kwavo kutenderera kutenderera kufamba. Nekudaro, kuti vawane kuvimbika, vanofanirwa kuchengetedzwa nekubatwa nemazvo. Izvi zvichaita kuti hupenyu hurefu hutakure hupenyu, zvichidzivirira nyaya dzakawanda dzinojairika ...
Nei kubereka kwangu kuchingoerekana kwaita ruzha rwakanyanya?
Jingnai Machinery isainzi uye tekinoroji inotakura bhizinesi rekubatanidza R&D, kugadzirwa nekutengeserana. Iyo kambani iri muLiaocheng guta, Shandong dunhu. Tinogona kupa mhando giredhi P0 (Z1V1), P6 (Z2V2), P5 (Z3V3). Iyo kambani yakawana ISO9001: 2008 uye IATF16949: 2016 system ...
Iko kune kumwe kuvhiringidzika kwakatenderedza hukama pakati peiyo chaiyo yekutakura, kushivirira kwayo kwekugadzira uye nhanho yekubvumidzwa kwemukati kana 'kutamba' pakati pemigwagwa nemabhora. Pano, Wu Shizheng, maneja wediki uye diki mabheyari nyanzvi JITO Bearings, sheds ligh ...
Kubvumbi 23-27, 2019, kambani yedu ichatora chikamu muTrade Fair ye Autoparts muBrazil (Sao Paulo). Booth No.: P156 Gamuchirai vatengi vekare uye vekare kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva Nyamavhuvhu 19 kusvika 22th 2018, Kambani yedu ichaenda kuChina International Bearing Industry Exhibition muShanghai, Booth Kwete iri E251, gamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva munaNovember 28 kusvika Zvita 1 muna 2018, kambani yedu inotora chikamu muAutomechanika Shanghai, Booth Nha.
Kubva munaNovember 27th kusvika 30th mu2018 kambani yedu ichatora chikamu muBauma CHINA 2018, Booth No ndeye N5.691. tinogamuchirwa vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva munaJune 10 kusvika 12, 2019, kambani yedu ichatora chikamu muFrankfurt auto zvikamu zvekuratidzira mu dubai. Iyo dumba nhamba ndeye sa-j38. Tinogamuchirwa vatengi vekare uye vekare kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva muna Kubvumbi 15 kusvika 19 muna 2019 kambani yedu inotora chikamu muchikamu chegumi nemashanu cheCanton Fair, Booth No is7.1D46 .inogamuchirwa vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.